Soomaaliya oo kaalinta koowaad ka gashay 29 wadan oo African ah (CADEYN) - iftineducation.com
Soomaaliya oo kaalinta koowaad ka gashay 29 wadan oo African ah (CADEYN)
aadan21 / February 14, 2016
iftineducation.com – Wadanka Soomaaliya ayaa waxaa uu kaalinta koowaad dhanka ku hadalka kaararka isgaarsiinta ka galay dalal badan oo ku yaala qaarada Africa, iyadoo dagaalo sukeeyo dalka Soomaaliya ay ka dhacayeen muddo ka badan 20 sano.
Dalka Soomaaliya ayaa la sheegay inuu ugu raqiisan yahay ku hadalka kaarka marka laga soo wacayo dalalka Dibadda, waxaana lala barbar dhigay dhaqaalaha ku baxa wadamada kale marka dibada laga soo wacayo, waxaana la sheegay in qiimaha “outgoing Calls” uu yahay $2.53 Doollar.
Warbixin lagu daabacay wargeyska Africa review ayaa lagu soo bandhigay qiimaha ku hadalka telefoonada gacanta iyadoo meelo badan laga eegayo.
Warbixinta waxaa lagu xusay in Soomaaliya ay tahay dalka ugu faqiirsan Geeska Africa,20 sano oo dawlad la’aan ahna ay soo martay hadana ay noqotay dalka ugu jaban isgaarsiinta gaar ahaan isticmaalka telefoonka gacanta.
Soomaaliya waxay noqotay dalka ugu raqiisan halka Zimbabwe ay noqotay dalka ugu qaalisan.
Wax Ka Guska Ragga iyo Warbixin Dhameystiran Oo hay’ada Caafimaadku ugu talo gashay.. inay dumarku….
Dowladda Sacuudiga oo Ciidamo iyo Diyaarado Dagaal u Diraya Dalka Turkiga (VIDEO)